Cayman Islands ichityora evashanyi marekodhi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Cayman Islands ichityora evashanyi marekodhi
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Cayman Islands Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Iwo maCayman Islands akachengetedza chikamu chayo chemusika nerimwe gore rekunyora-kupaza nhamba dzinosvika.
Ichitevera gore rakadzoreredzwa rekufamba kweCaribbean nemakwikwi akawedzera mudunhu rese, iyo Cayman Islands yakachengetedza chikamu chayo chemusika nerimwe gore rekunyora-kupaza nhamba dzinosvika. Pakupera kwegore ra2018, kushanya kwakazara kwakapfuura makore ese apfuura ekushanyirwa kwakanyorwa kusanganisira 2006, iyo yaimbove yakabata rekodhi yenhamba yepamusoro yevashanyi vese mugore rekarenda.
Vese vanosvika gore ra2018 mukushanya kwese kwemhepo uye kwechikepe kwaive 2,384,058, inova 11.05 muzana kuwedzera panguva imwechete muna 2017 (237,211 vanhu vakawedzera). 463,001 stayover vashanyi, kuwedzera kwe10.66 muzana -kuwedzera 44,598 vashanyi-pamusoro pegore ra2018, igore rekunakidza 'kutanga' kwenzvimbo yekuenda:
Zvitsuwa zveCayman zvakagamuchira vanopfuura mazana mana mazana mana ezviuru zvevashanyi kwekutanga.
Vanosvika mu2018 vanomiririra yakakwira kwazvo nhamba yekushanya kwekutorera kwegore rekarenda munhoroondo yakanyorwa (kupfuura Jan-Dec 2017).
Sekubudirira kwakapetwa mu'kutanga 'pamusoro pevashanyi vanosvika zviuru makumi mashanu vakashanyira kwavaienda mukati memwedzi mumwe chete, zvichiitika kaviri muna 50,000: Kurume naZvita.
Uku kuwedzera kwakakosha mukushanya kwakakanganisa hupfumi hwenzvimbo nechikwiriso chemashandiro evashanyi, ichiwedzera neUS $ 98.1m pamusoro pa2017. Mari inofungidzirwa yevashanyi yose muna 2018 yaive US $ 880.1m, kuwedzera kwe12.5 muzana.
Mutevedzeri weMutungamiri uye Gurukota rezveKushanya, Hon. Moses Kirkconnell akagovana, "Basa reMinistry neDhipatimendi reKushanya ndere kufambisa kukura kwegore mukushanya uye mupiro wezveupfumi; Hushumiro hwangu hunoteedzera izvi zvinehunyanzvi gore rega rega. Kubudikidza nekusimudzira kukwidziridzwa, kudyidzana, uye kuenderera mberi kwekudyidzana nevatinoshanda navo mumaindasitiri, isu takachengetedza chiitiko chakakosha cheakaenderera-rekodhi makore. Hurumende yedu yakazvipira kuisa mari munzvimbo dzedu dzekupinda kuCruise Port neAirport. Iyi inodiwa-inovandudzwa ichabatsira vashanyi vanoshanda, mabhizinesi, vashanyi uye vagari. Ini tarisiro yangu ndeyekuona kuti zvese zvidzidzo mubazi rangu rebazi zvinoshanda nemazvo uye zvinobudirira kutsigira chikamu chekushanya. Mhedzisiro iyi chiratidzo chakanakisa chebasa rakaitwa muna 2018. ”
Muna 2018, USA, Canada, uye LATAM dzakanyanya kukanganisa manhamba ekusvika. Zvikurukuru, nyika dzine simba rakakura pakuita kwese muna 2018 dzaive:
• Nyika dzakabatana: 13.01%
• Kanadha: 7.46%
• Zimbabwe: 7.63%
Mwedzi waZvita unozivikanwa sewepamusoro pane zvese zvakanyorwa, ne6.15 muzana yekuwedzera kwevanosvika stayover pamwe nekwavari kuenda vanogamuchira vanopfuura zviuru makumi mashanu zvakakonzerwa nemisika yeNorth America. Sezvo nekuwanda kwehuwandu kuwanda, USA yaive nemhedzisiro huru mumwedzi waZvita ichinge yakura nevanopfuura zviuru zviviri nemazana matanhatu evashanyi. Izvi zvinoratidza wemakumi maviri nemana akateedzana mwedzi wekukura kwemusika uyu uyo ​​waisanganisira kuwedzera kwesimba nemutakuri wenyika Cayman Airways kubva kuJFK nendege dzezuva nezuva muna Zvita 50,000 zvichienzaniswa naDecember 2,600. Canada yakaona kukura kwe21 muzana ichiita kuti ive yakanakisa Zvita munhoroondo yenhoroondo. yekuCanada stayover kushanya. Kuwedzera pakubudirira kwenhamba dzaDecember-kupaza manhamba, Latin America yakawedzerawo ne2018 muzana uye zvino ndiwo mwedzi wakanakisa mukusvika nhoroondo yenharaunda iyoyo.
"Dhipatimendi rezveKushanya rekushambadzira kwemusika musanganiswa pamwe nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwenzira nyowani kuenda kwairi kuenda uye zvirongwa zvekushambadzira zvakaenderera mberi nekufambisa kubudirira kwekuputsa kweCayman Islands uye kuchaenderera mu2019," akadaro Director we Tourism. Mai Rosa Harris. “Tichicherekedza kuti nendege yakakosha pakufamba nekushanya timu yedu yepasi rose inoramba yakazvipira kuwedzera huwandu uye vanofara zvikuru kuvhura zviri pamutemo nzira yeDenver Colorado munaKurume neCayman Airways. Segedhi reWest Coast, tinotarisira kugamuchira vashanyi vazhinji vanobva kuColorado nemaguta matsva kubva kuUnited States mu2019 kuwedzera kune rimwe gore rekubudirira kweCayman Islands. "Ndinoda kuratidza kutenda kwangu kwechokwadi kune vese vatinoshanda navo pakushanya nekutora chikamu mumishandirapamwe yekushambadzira, kugashira vashanyi vedu, vatapi venhau nevamiriri vezvifambiso kuitira kuvaraidza, kudzidzisa nekutakura chiratidzo cheCayman Islands pasi rese."